Blog – Page 124 – Ramjham Nepal
ramjham२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०४:५९0Views0
आर.बी मुभिजको प्रस्तुतिमा तयार भएको चलचित्र ‘ड्रिम गल’को पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ । काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रमा समावेश ‘तिम्रो मायामा हराउन’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । ऋषिराज आचार्यको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्र असोज १९ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । सार्वजनिक गीतमा अन्जु पन्त र सुरेश लामाको स्वर छ भने अर्जुन पोखरेलको संगीत र अम्बिका शर्माको शब्द छ । चलचित्रको गीतमा मुख्य कलाकार आकाश श्रेष्ठ र आश्मा गिरीलाई देखाइएको छ । चलचित्रमा आश्मा शिर्ष भूमिकामा देखिदैछिन् । चलचित्रमा विल्सन विक्रम राई, सरोज खनाल, अर्जुन श्रेष्ठ, लक्ष्मी गिरी, निर्मल शर्मा, पूजा पराजुली लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । चलचित्रमा राहुल राई र रामेश्वर हुमागाँइको छायांकन, गम्भिर बिष्टको कोरियोग्राफी, नविन निरौलाको सम्पादन छ । चलचित्रमा अर्जुन शर्मा, ऋषिराज आचार्य र रामेश्वर धितालक...
धीरजले बनाए ओम बिक्रम बिष्टमाथि डकुमेन्ट्री (भिडियो)
ramjham२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०४:५३0Views0
काठमाडौं - नेपाली पप सम्राट ओम बिक्रम विष्टको जीवनमा आधारित डकुमेन्ट्री बनेको छ । पप साँगीतिक क्षेत्रमा बिष्टले भेगेका दुःख सुखलाई समेटिएको उक्त डकुमेन्ट्री गायक धिरज राईले तयार गरेका हुन् । डकुमेन्ट्रीमा नारायण गोपालदेखि सुगम पोख्रेलसम्मको पप शैलीको विकास क्रममलाई समेटिएको छ । करिब पाँच वर्ष लगाएर तयार भएको डकुमेन्ट्रीको निर्देशन गायक धीरज राईले गरेका हुन् । उनले आफ्नै युटुब च्यानलमार्फत उक्त डकुमेण्ट्री रिलिज गरेका छन् । डकेमेन्ट्रीमा नेपाली पप गीतको इतिहास समेटिएको छ । भिडियो हेर्नुहोस्ः ...
डा. उपेन्द्र देवकोटालाई पुर्ख्यौली घर लगियो [फोटो फिचर]
ramjham२६ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०९:३९0Views0
२६ जेठ, काठमाडौं । वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटालाई जन्मथलो गोरखा लगिएको छ । उनकै इच्छाअनुसार जन्मथलो लैजान लागिएको हो । हेलिकोप्टरबाट बोहोरा गाउँ पुर्‍याइएको छ । डा. देवकाटाले पुर्खौली घरको पीढिमा बस्ने र सिष्नेपानी धाराको पानी खाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । त्यसअनुसार गोरखा लगेर केहीबेरमै फकाइने डा. तारा अधिकारीले जानकारी दिए । पित्तथैलीको क्यान्सरबाट पीडित देवकोटाको बाँसबासीस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. बसन्त देवकोटाका अनुसार डा. उपेन्द्रलाई बेलाबेलामा रोगले च्याप्ने र बेलाबेलामा सुधार भएको जस्तो देखिने गरेको छ । तर, शुक्रबार बेलुकीदेखि उनीबारे अप्रिय कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि परिवार पीडामा छ । न्यूरो अस्पतालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देवकोटाबारे सामाजिक सञ्जालहरुमा सम्प्रेषित खबरमा कुनै सत्यता नरहेको र उनको...
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सफलताः ‘तोकेको मितिभन्दा २ दिन अघिनै सकियो काम’
ramjham२४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:०८0Views0
चितवन– विगत तीन वर्षयता नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको विस्तारका कारण दिन र रातको समयमा सवारी रोकिँदा यात्रुले हैरानी बेहोर्दै आएका थिए । खाल्डाखुल्डी सडक, छिनछिनमा झर्ने पहिरो र दैनिक आवागमन रोकिँदा यात्रु र चालकको यात्रा कष्टकर हुँदै आएको थियो । सो सडक हुँदै दैनिक दश हजार हाराहारीमा सवारी गुड्ने गर्दछन् । यो राजधानीसँग जोड्ने लाइफलाइन पनि हो । समयमा काम सक्न ठेकेदार कम्पनीहरुलाई दबाब परिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको एकसय दिन पुगेको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गरे । त्यसमा जेठ २५ गतेबाट नारायणगढ मुग्लिन सडक नरोकिने उल्लेख थियो । यससँगै कालोपत्रको पहिलो तह सकेर बाटो खोल्नुपर्ने दबाबमा नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजना पर्यो । यस आयोजनाका संयोजकसमेत रहेका सडक विभागका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सञ्जयकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको सन्देशअनुरुप नै रातदिन...
ramjham२४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:०५0Views0
वीरगन्ज–एकीकृत जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेक पोष्ट— आइसीपी) सञ्चालनमा आएयता नेपाली व्यापारीले सस्ती खेप्नु परेको छ । दिनहुँ ५ सय कन्टेनर पास हुने रक्सौल वीरगंज नाकाबाट अहिले आइसिपी लागू भएदेखि दैनिक डेढ सय कन्टेनर नेपाल भित्रन समेत हम्मे हम्मे परेको व्यवसायीले बताएका छन् । आइसीपी लागू हुनेवित्तिकै उद्योग व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण उपहार भनिएकोमा अहिले तिनै व्यवसायीलाई आइसीपी टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले उद्योगी व्यवसायीको कन्टेनर १०/१२ दिनसम्म पनि आइसीपिका लागि जाममा बस्ने गरेको बताए । शर्माले भारतीय पक्षको कारण अहिले रक्सौल नाका भएर सामान ल्याउने उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गरे । यसले गर्दा लागत समेत उत्तीकै बढेको छ । ‘एकदिनको पार्किङ शुल्क भारु ४ सय ७४ रुपैयाँ पर्छ, जति दिन लम्बियो त्यतिकै दरमा हरेक दिन शुल्क थपिदै...
ramjham२४ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०९:३५0Views0
२४ जेठ, काठमाडौं । म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका सागर थापासहित ६ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बिहीबार सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, सन्दीप राई, रितेश थापा, विकास सिंह क्षेत्री, प्रशिक्षक अञ्जन केसी र फिजियो डेजिव थापाले सफाइ पाएका हुन् । उनीहरुविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाइएको थियो । तर, राज्य विप्लवको कसुर गरेको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । फिक्सिङको आरोपमा २७ असोज २०७२ मा सागर थापासहितका खेलाडी पक्राउ परेका थिए भने २४ कात्तिकमा सबै धरौटी बुझाएर छुटे । अञ्जन केसी र रितेश थापाले ५ लाख, सागरले १ लाख ५० हजार र अन्यले ५० हजार धरौटी तिरेका थिए । नेपालले २००८ देखि खेलेका अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पैसा लिएर हारेको ...